उदयपुरमा भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा एकको मृत्यु -
उदयपुर । उदयपुरमा भएको ट्याक्टर दुर्घटनामा सोमबार एकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सप्तरी स्थित सप्तकोशी नगरपालिका– १ फत्तेपुर बस्ने अन्दाजी वर्ष ६० को प्रेम कुमार तामाङ रहेको छ । दुर्घटना जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका– १४ साउने स्थित धाप्लाङमा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका नायव उपरिक्षक (डिएसपी) अर्जुन रानाभाटले बताए ।
डिएसपी रानाभातका अनुसार सदरमुकाम गाईघाटबाट साउनेको धाप्लाङतर्फ जादै गरेको स.१ त ६१५२ नम्बरको ट्याक्टरलाई ओभरटेक गर्दा अचानक बिच बाटोमा स. ७ प ५१९३ नम्बरको मोटरसाईकल पल्टिदा दुर्घटना भएको थियो । तामाङलाई ट्याक्टरको टायरले किच्दा घट्नास्थमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीको अनुसार मोटरसाईकल चालक मृतकका छोरा बर्ष ४० को एजेट नासुर (तामाङ) सकुसल रहेको छ । अहिले ट्याक्टर चालक फरार रहेको र ट्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा रहेको छ । घट्नास्थल सदरमुकाम गाईघाटबाट २४ कि.मि. टाढा रहेको छ ।